Shiinaha Belt nooca warshad batching la taaban karo iyo alaab-qeybiyeyaasha | Shantui
Qalabka Dufcadda la taaban karo
Warshadda Dufcadaha La Taaban karo ee Ganacsiga
Mashiinka Gawaarida Gawaarida
Warshadda dhirta ee Asphalt
Wadada Isku Qasan
Qalabka Keenida Qalabka
Dhismaha & Burburka Qashinka Qalabka
Qalabka isbarbar dhiga
Mashiinka Isku Darka Mashiinka
Warshad motar qalalan
Qalabka Calaamadaha Ciida
Warshad batching la taaban karo Mobile
Qaadida rugta mobilada baaldiga
aasaaska ba ...
Nooca suunka batching la taaban karo ...
Nooca suunka warshad batching la taaban karo
Warshaddu waxay ka kooban tahay nidaamka wax lagu barto, nidaamka miisaanka, nidaamka isku qasidda, nidaamka korontada lagu xakameeyo, nidaamka kontoroolka pneumatic iyo wixii la mid ah isu geynta, budada, dareeraha lagu daro iyo biyaha si otomaatig ah ayaa loo miisaami karaa uguna qasmi karaa geedka.
Warshaddu waxay ka kooban tahay nidaamka wax lagu barto, nidaamka miisaanka, nidaamka isku qasidda, nidaamka korontada lagu xakameeyo, nidaamka kontoroolka pneumatic iyo wixii la mid ah isu geynta, budada, dareeraha lagu daro iyo biyaha si otomaatig ah ayaa loo miisaami karaa uguna qasmi karaa geedka. Isku-darka waxaa lagu raray weelka hore xajiyaha weelka. Budada waxaa laga soo siiyaa silo ilaa miisaanka miisaanka iyada oo la qaadayo qalabka wax lagu buuxiyo .Water iyo daro dareere ayaa lagu shubaa miisaanka. Dhammaan nidaamyada miisaanka ayaa ah miisaanka elektarooniga ah.
Warshaddu si buuxda ootomaatik ah ayey u maamushaa kombiyuutarka oo leh maareynta wax soo saarka iyo barnaamijyada daabacaadda xogta.
Waxay isku qasan kartaa noocyo kala duwan oo shub ah oo ku habboon goobaha dhismaha ee cabbirka dhexdhexaadka ah, saldhigyada korantada, waraabka, waddooyinka waaweyn, garoomada diyaaradaha, buundooyinka, iyo warshadaha cabbirka dhexdhexaadka ah ee soo saara qaybaha horay loo sii diyaariyay.
Naqshadeynta 1.Mudular, isku-habboonaanta iyo kala-baxa, wareejinta degdegga ah, qaab-dejinta jilicsan.
2.Belt nooca xamuulka qaada, waxqabadka xasiloon; Ku qalabaysan hopper kaydinta wadarta, waxsoosaar sareeya.
Nidaamka miisaanka miisaanka wuxuu qaataa qaabdhismeedka dheelitirka dheelitirka si loo hubiyo saxnaanta cabbirka sare iyo awoodda faragelinta kahortagga faragelinta.
Xirmooyinka nooca 4.Container, isku xirnaanta aaminka ah iyo habboon iyo kala-goynta, dib ayaa loo isticmaali karaa.
5. Nidaamka korantada iyo nidaamka gaaska waxaa lagu qalabeeyay kalsooni sare iyo mid sare.
Wax soo saar aragtiyeed m³ / h 60 90 120 180 240 270
Mashiinka Habka JS1000 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 JS4500
Awood wadista （Kw） 2X18.5 2X30 2X37 2X55 2X75 2X75
Awood siinta （L） 1000 1500 2000 3000 4000 4500
Ugu badnaan wadarta wadartaGarool / Dhagax dixeed mm） 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
Qashin-qaadista Volume m³ 3X12 3X12 4X20 4X20 4X30 4X30
Awoodda gudbiyaha suunka t / h 200 300 400 600 800 800
Baaxadda miisaanka iyo saxnaanta cabbirka Wadar wadar ah 3X
± 1000 ± 2%）
± 1500 ± 2%）
± 2000 ± 2%）
（3000 ± 2%）
（4000 ± 2%）
00 4500 ± 2%）
Sibidhka kg 500 ± 1% 800 ± 1% 1000 ± 1% 1500 ± 1% 2000 ± 1% 2500 ± 1%
Duula dambaska kg 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 800 ± 1% 900 ± 1%
Biyaha kg 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 800 ± 1% 900 ± 1%
Dheeraad ah kg 20 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1% 80 ± 1% 90 ± 1%
Bixinta dherer m 4 4 4.2 4.2 4.2 4.2
Wadarta awoodda KW 100 150 200 250 300 300
Hore: Ka bood boodboodaya geedka batching laabta
Xiga: Xawaare-xawaare sare tareenka u go'an warshad batching la taaban karo
Warshadda Dufcadda la taaban karo ee Belt
Soosaaraha Warshadda Dufcadda Belt
Qeexitaanka Dhirta La Taaban karo ee Belt
Dhirta Dufcadda la taaban karo ee Belt
Suunka Container Belt Conneyor Dufcaddii Plant
Warshadda Qashin-qaadista Suunka ah ee iibinta suunka
Qiimaha Warshadda Laamiga ah ee Mucjisada ah
Dhirta Dhoolatada La taaban karo ee Belt
aasaaska warshad batching la taaban karo
Astaamaha 1. Qaab-dhismeedka bilaashka ah ee aasaaska, qalabka waxaa lagu rakibi karaa wax soo saar ka dib marka goobta shaqada la simo oo la adkaado. Ma aha oo kaliya in la dhimo qarashka dhismaha, laakiin sidoo kale la gaabiyo wareegga rakibidda. Naqshadeynta qaabdhismeedka badeecaddu waxay ka dhigeysaa mid ku habboon oo deg deg ah kala-goynta iyo gaadiidka. 3. Guud ahaan qaab dhismeedka is haysta, qabsashada dhulka oo yaraata. Habka Faahfaahinta SjHZN0 ...
Tilmaamyada 1. Isku-xirnaanta habboon iyo kala-goynta, dhaqdhaqaaqa sare ee kala-guurka, habboon oo dhakhso leh, iyo la-qabsiga goobta shaqada oo qumman. Qaab dhismeed iswaafaqsan oo macquul ah, naqshad qaabdhismeed sare; Hawlgalku wuu cad yahay wax qabadkiisuna waa deggan yahay. 4. Qabsashada dhulka oo yaraata, wax soo saar badan; Nidaamka korantada iyo nidaamka gaaska waxaa lagu qalabeeyaa kalsooni sare iyo mid sare. Warshadda isku darka la taaban karo ee moobiilku waa qalab wax soo saar la taaban karo ...
Xawaare-xawaare sare tareenka u heellan batching la taaban karo ...
Astaamaha 1. Qaab dhismeedka qaabeysan, oo ku habboon in la soo ururiyo oo la kala furfuro, wareejinta degdegga ah, qaabeynta dabacsan; 2.Adopting fiicni-oolnimada, oolnimada wax soo saarka sare, taageerida noocyo badan fo technology quudinta, ku habboon baahiyo isku qasin la taaban karo oo kala duwan, looxyada dahaadhka iyo garbaha ay qaataan daawaha wax daawaha u adkaysta, oo leh adeeg dheer nolosha. Nidaamka cabbirka wadarta guud wuxuu gaaraa cabbiraadda saxda ah ee wadarta guud iyadoo la hagaajinayo d ...
Ka bood boodboodaya geedka batching laabta
Astaamaha Warshadda waxay ka kooban tahay nidaamka wax lagu barto, nidaamka miisaanka, nidaamka isku qasida, nidaamka korontada lagu xakameeyo, nidaamka xakamaynta pneumatic iyo iwm. Saddex isu geyn, mid budo ah, hal dareere lagu daro iyo biyo ayaa si otomaatig ah loo miisaami karaa uguna qasmi karaa geedka. Isku-darka waxaa lagu raray weelka hore xajiyaha weelka. Budada waxaa laga soo siiyaa silo ilaa miisaanka miisaanka iyada oo la qaadayo qalabka wax lagu buuxiyo .Water iyo daro dareere ayaa lagu shubaa miisaanka. Dhamaan weighi ...
Tilmaamyada 1. Isku-xirnaanta habboon iyo kala-goynta, dhaqdhaqaaqa sare ee kala-guurka, habboon oo dhakhso leh, iyo la-qabsiga goobta shaqada oo qumman. Qaab dhismeed iswaafaqsan oo macquul ah, naqshad qaabdhismeed sare; Hawlgalku wuu cad yahay wax qabadkiisuna waa deggan yahay. 4. Qabsashada dhulka oo yaraata, wax soo saar badan; Nidaamka korantada iyo nidaamka gaaska waxaa lagu qalabeeyaa kalsooni sare iyo mid sare. Faahfaahinta M ...
Madal biyo warshad batching la taaban karo
Astaamaha 1.Waxay ku habboon tahay wax soo saarka dhismaha biyaha, qaabdhismeedka qaaska ahna wuxuu buuxiyaa shuruudaha laga qabo biyaha xasiloon. Qaab dhismeedka iswaafajintu wuxuu yareyn karaa qiimaha dhismaha ee barxadda. 3. Qalabku wuxuu leeyahay badbaado sare wuxuuna la qabsan karaa dejinta aasaaska aasaasiga iyo saameynta duufaanka. Waxaa lagu rakibay biinado iskudhafan oo mug leh, quudinta hal-mar ah waxay la kulmi kartaa wax soo saarka 500m3 ee la taaban karo (waa la habeyn karaa ...
Maya, 268, wadada duandian koonfureed, Jinan, Gobolka Shandong